माओवादीले जबज स्विकार नगरे पार्टी एकता हुँदैन: रघुवीर महासेठ – Everest Dainik
माओवादीले जबज स्विकार नगरे पार्टी एकता हुँदैन: रघुवीर महासेठ
'आवश्यकता अनुसार बरु प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ'
रघुवीर महासेठ भन्छन-“माओवादीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्विकार नगरे पार्टी एकता हुँदैन !” आवश्यकताअनुसार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि सकिन्छ । तर यो निर्णय अहिले भइसकेको छैन । जनताको म्यान्डेट अनुसार केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । महासेठसंग गरिएकाे कुराकानीकाे संपादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे छ ।
नेकपा एमाले र माओबीच पार्टी एकता हुन्छ ? एकता हुने आधार केके छन् ?
पार्टी एकता हुन्छ । एकताको आधार भनेको जुन प्रकारले वाम गठबन्धन भएको थियो, त्यही आधारमा एकता हुन्छ । गठबन्धनको बाटो हुँदै एकता प्रक्रिया टुङ्गिन्छ ।
पदीय भागबण्डा कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
नेतृत्वतहदेखि तल्लो तहसम्म योग्यता र क्षमताका आधारमा पदीय भागबण्डा मिल्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बनाउने हो ?
अहिल नै कुनै निर्णय भइसकेको छैन । दुई अध्यक्षको बिचमा छलफल भइरहेको छ । संयोजन समितिभित्र पनि छलफल भइरहेको छ । कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा दुवै दल गम्भीर छ ।
माओवादीले त केपी ओली प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड अध्यक्ष भनेर निर्णय गरिसक्यो नि ?
माओवादीले निर्णय गर्नु अस्वभाविक होइन । माआवादी र एमाले पार्टी एकता हुन लागेको हो । यो स्थितीमा एमाले र माओवादीको निर्णय एक ठाउँमा राखेर सहमति गछौँ ।
सम्बन्धित् समाचार भूकम्पमा फरार १११ जना कैदी अझै सम्पर्कबाहिर
तर पार्टी एकताबारे जनता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् नि ?
जनताले नै पार्टी एकताका लागि जनमत दिएका हुन् । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबिचमा करिब करिब कुरा मिलिसकेको छ ।
तर पद र शक्ति बाँडफाँटमा कुरा मिल्न सकेको छैन नि ?
एकीकरणमा पावर सेयरिङ हुँदैन । हामी सत्ता र शक्तिका लागि एकता गर्न लागेका होइनाँै । जनताको चाहनाअनुसार अगाडि बढ्न लागेको हौँ । एकताका क्रममा प्रचण्डलाई अध्यक्ष दिन पनि सकिन्छ । आवश्यकताअनुसार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि सकिन्छ । तर यो निर्णय अहिले भइसकेको छैन । जनताको म्यान्डेटअनुसार केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि छ । जनताले त ओलीलाई पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनेको देख्न चाहेका छन् । एमाले जुनसुकै त्याग गर्न पनि सक्छ । को प्रधानमन्त्री र को अध्यक्ष भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । दुईजना नै अध्यक्ष बनेर सामुहिक रुपमा अगाडि जान पनि सक्छौँ ।
बामदेव गौतमले त प्रधानमन्त्री आलोपालो बन्ने सहमति भएको हो भन्नुभएको छ नि ?
कसरी एकता हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै बालेर त हुँदैन नि । हामी एउटा सिद्धान्तमा आधारित भएर एकता गछौँ ।
सम्बन्धित् समाचार जनप्रेमी र विकासप्रेमी पार्टी मात्रै अस्तित्वमा : शर्मा
योगेश भट्टराईले त प्रचण्ड र ओलीले नेतृत्व छोडेर अरुलाई अघि सार्नुपर्छ भन्नुभएको छ नि ?
योगेश भट्टराई हाम्रो पार्टीको सचिव हुनुहुन्छ । अहिले चुनाव जितेर पनि आउनुहुन्छ । उहाँले यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भनेर म विश्वास पनि गर्दिन । यदी भन्नुभएकै हो भने गल्ती गर्नुभयो । तर त्यो कुरा उहाँको व्यक्तिगत अधिकार पनि हो । अहिले देश र जनतालाई ओली र प्रचण्डको आवश्यकता छ ।
घनश्याम भुसालले त एकताका लागि जनताको बहुदलीय जनवाद छोड्नुपर्छ भन्नुभएको छ नि ?
यो वाहियात कुरा हो । जनताको बहुदलीय जनवाद छोडेर त पार्टी एकता हुनै सक्दैन ।
जनताको बहुदलीय जनवादलाई त माओवादीले मान्दैन होला नि ?
मान्दैन भने एकता नहुन पनि सक्छ । हामी सत्ताको लागि विचार छोड्न सक्दैनाै ।
तपाईहरुको यस्तो कुराले त एकतामा असर गर्ला नि ?
जनताले पार्टी एकताका लागि वाम गठबन्धनलाई करिब करिब दुई तिहाई बहुमत दिएको हो । जनताको बहुदलीय जनवादलाई मूल विचार मानेर जनताले विश्वास गरेका हुन् । यस्तो स्थितीमा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादलाई छोड्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन ।
सम्बन्धित् समाचार ‘राजा सिकार खेलेर धेरै वन्यजन्तु मारे’
माओवादीका नेताहरुले चाँही जनताको बहुदलीय जनवाद छोड्नुपर्छ, नत्र पार्टी एकता हुँदैन भनेका छन् । तपाईहरु सिद्धान्तमा झगडा गर्दा पार्टी एकता भाँडिने देखियो नि ?
कसले के भन्यो भन्ने कुरा उहाँहरुको निजी विचार हुन् । तपाई एउटा कुरा लेखेर राख्नुस्, जनताको बहुदलीय जनवादलाई छोडेर एमाले एकीकरणमा जाँदैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै दलको सहमतिमा प्रदेश प्रमख तोक्ने कुरा गर्नुभएको छ । यसमा तपाईहरुको धारण के छ ?
प्रधानमन्त्री देउवा अहिले जुन बाटो हिँड्नुभएको छ, त्यो गलत हो । नगर्नुपर्ने निर्णय पनि उहाँले गर्नुभएको छ । त्यसैले उहाँले गरेको निर्णय अब बन्ने सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । उहाँले बल मिच्याई गरेर जे पनि निर्णय गरिरहनुभएको छ । प्रदेश प्रमुखको सवालमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले र माओवादीसँग कस्तो सल्लाह गरेर अघि बढ्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । सहमतिमै भयो भने ठीकै छ । एकल निर्णय गरेर जानुभयो भने आउने सरकारले विचार गर्छ ।
यसरी प्रिया गोलानी आफ्नो डान्स सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्दै
सरकार भन्दा पार्टी शक्तिशाली, स्थापितपछि सोडारी, अब कसको पालो ?
अवैध सम्बन्ध ढाकछोप श्रीमानको हत्या
सिस्नुपानी देउसी हेर्नुस्, पेट मिचिमिचि हाँस्नुहोस् ! [भिडियोसहित]